ပြီးတာနဲ့အချိန်ပေါ်၌ဖြစ်နိုင်ချေထက်ကျော်လွန်သည့်မုန့်အမာရွတ်များဖယ်ရှားပစ်ရနိုငျသောသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့အဲဒီမှာထိုကဲ့သို့သောမုန့်, ဒါပေမယ့်၎င်းတို့အားလုံးကိုအမှန်တကယ်ထိရောက်သောဖြစ်ကြသည်။ သင်တန်း၏, နေဆဲ၏ထိရောက်မှုအရှိဆုံးလမ်း အမာရွတ်များကိုဖယ်ရှား လေဆာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အားလုံးမဟုတ်လူအပေါင်းတို့သည်ထိုသို့သောအစွန်းရောက်ခြေလှမ်းဝံ့ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမတတ်နိုင်နှင့်နိုငျပါဘူး။ သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်များ၏အကြီးအသိပ္ပံပညာရှင်များရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာဒီဇိုင်းနှင့်ဖန်တီးခဲ့ကြကြောင်းပင်လိမ်းဆေး, ဆီ, gels, ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများနှင့်ဖြစ်ကြသည်။
Kontraktubeks - အမာရွတ်များဆန့်ကျင်နံ့သာဆီ
ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီဆီမှေးအဆိုပါငြိမ်းစေလျက်အမာရွတ်များအများအားဖြင့်အနုတ်လက္ခဏာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းစုဆောင်း။ လူများကအသုံးပြုနေသည်, သို့သော်လိုချင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုပင်အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခြင်းကိုအပြီးပေါ်ပေါက်မထားဘူး။
နံ့သာပေါင်းစပ်ဖို့ပြောပြတယ်ထားတဲ့ဟာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့ဖွဲ့စည်းမှု, ခဲ့ပါသည် - ဓာတုဆေးဝါးပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်သဘာဝအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။
heparin ဆိုဒီယမ် - - Kontraktubeks ဆိုဒီယမ် heparin ပါဝင်ပါသည်ဒီဥစ္စာသွေးခဲစနစ်, allantoin နှင့်ကြက်သွန်ထုတ်ယူဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ဒါဟာလတ်ဆတ်တဲ့အမာရွတ်များအပေါ်ကိုအသုံးပြုသည်ဒါဆီမွှေး, အမာရွတ်များ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်သောလက်စွဲစာအုပ်ပြည်နယ်များ။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးကော်လာဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆျောနဲ့ anti-inflammatory အရေးယူထားပါတယ်။
နံ့သာအပေါ်ယံအမာရွတ်များအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဖြစ်ကောင်းကအကြောင်းဒါ ultrasound မရှိဘဲအသုံးပြုသောသူတို့၏အမျိုးအအနုတ်လက္ခဏာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရှိပါတယ် - ဒါဟာအကောင်းဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက် ultrasound နှင့် တွဲဖက်. များတွင်အသုံးပြုခံရဖို့အကြံပြုသည်။
မျက်နှာနှင့် Kelofibraza ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်အမာရွတ်များအဘို့နံ့သာဆီ
Kelofibraza - မုန့်ဆင်တူ texture တစ်ဦးရဲရင့်ထူမုန့်။ ဒါဟာသုံးအရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းများရှိပါတယ်: ယူရီးယား, အရေပြားဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့ဖြစ်စဉ်များကိုထိန်းညှိပေးသော, ဤ Anti-inflammatory နဲ့ analgesic အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ရာသည်၎င်း၏ elasticity, heparin ဆိုဒီယမ်နှင့် D-ပရုတ်, ပိုကောင်းစေပါတယ်။
Kelofibraza အလေးချိန်၏ချွန်ထက်အတက်အကျကနေရရှိလာတဲ့, အမာရွတ်များ၏ကုသမှု, ဒါပေမယ့်လည်းအရေပြားပေါ်မှာလမ်းပိုင်းအမှတ်များ၏ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့မသာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီဆီမွှေးကိုအပြီးအမာရွတ်များအသုံးပြုသည် မီးလောင် - ယူရီးယားအရေပြားအတွက်အစိုဓာတ်ဟန်ချက် moisturizes နှင့်ပြုပြင်။ ဒီ tool ကအမာရွတ်များမရှိဘဲအသားအရေများအတွက်ရန်ပွဲအတွက်ဖြည့်စွတ်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေနိုင်ပါသည်။4ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်2အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်း။
Kelo-Cote (Kelo-ကြောင်) - ဆီလီကွန်နှင့်အတူအမာရွတ်များ၏ resorption တစ်ခုဆီမွှေး
polysiloxane - - ဆီလီကွန်နှင့်ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တစ်ခုအော်ဂဲနစ်ဆင်းသက်လာတဲ့မျိုးဖြစ်သည့်ဆီလီကွန်, ဒီနှစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့ပစ္စည်းပါဝင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ ဒါဟာဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ယနေ့အထိအထိရောက်ဆုံး tool ကို, အမာရွတ်များ, အမာရွတ်များနှင့်လမ်းပိုင်းအမှတ်၏ကုသမှုတွင်အသုံးပြုသည် non-ထိုးဖောက်နည်းလမ်းများကြောင်းယုံကြည်ရသည်။
ဤသည်ပစ္စည်းဥစ္စာတို့သည်အမာရွတ်များ, မြှောက်ပျော့ပြောင်းပြီးနှင့်အစိုဓာတ်ကိုဖြစ်လာကူညီပေးသည်။ Kelo-Cote အရေပြားပြုပြင်ဒါပေမယ့်လည်း 24 နာရီအတွင်းကကာကွယ်ပေးသည်သာ။
Scarguard - အနာများအတွက်နည်းလမ်း
hydrocortisone, ဗီတာမင် E နှင့်ဆီလီကွန် - အမာရွတ်များ၏အနာရောဂါငြိမ်းစရာဘို့ဤဆီမွှေးကိုသုံးအဓိကထုတ်ကုန်များပါဝင်ပါသည်။ ထိုသို့သောအလားအလာဖွဲ့စည်းမှုထိရောက်သောနိုင်ပါတယ် - ဗီတာမင် E ကိုအရေပြားချောမွေ့အမာရွတ်များနှင့်ဆီလီကွန်အချိန်ကြာမြင့်စွာကအရေပြားကိုကာကွယ်ပေးသည် moisturizes နှင့်မျာကိုပြန်လည်။ တစ်ရှူးငြိမ်းစေလျက်နေစဉ်ဆီမွှေးကိုအသုံးပြုတဲ့အခါပျက်စီးသွားသောအသားအရေချုံ့။ နံနက်နှင့်ညနေပိုင်း - နည်းလမ်တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်သုံးစွဲဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။
Spenko - ဆီလီကွန်ပန်းကန်
ဆီ၏အကူအညီဖြင့်အမာရွတ်များ၏ကုသမှု - ပြား၏အကူအညီဖြင့် - ဤဆေးဝါးအခြားသောလမ်းဖန်တီးနိုင်အောင်, ထိုနေ့ရက်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခံစားချက်တွေကိုအဖွဲ့အစည်းကြောင့်လူတိုင်းအယူခံမပြုစေခြင်းငှါတလမ်းတည်းဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။
Spenko - တစ်ဦးအင်္ဂတေသို့မဟုတ်ပတ်တီးကိုအသုံးပြုပြီးဘေးဒဏ်သင့် site ကိုမှ fixed တစ်ပွင့်လင်းဆီလီကွန်ပန်းကန် 10x10 စင်တီမီတာပန်းကန်အမာရွတ်များအမျိုးမျိုးတို့ကိုကုသအသုံးပြုသည် ..
က Ultra cream Zeraderm
စစ်ဆင်ရေးအပြီးအမာရွတ်များဒီတူညီနံ့သာဆီတစ်သျှူးပျက်စီးမှုကိုချုံ့ခြင်းနှင့်အနာရောဂါငြိမ်းစရာမြှင့်တင်ရန်သောအသားအရေပေါ်တွင်တစ်ဦးရုပ်ရှင်ဖြစ်ပေါ်လာသောနှင့်ရေစိုခံအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ နည်းလမ်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကနေအသားအရေကိုကာကွယ်ပေးသည်, ထို့ကြောင့်အသုံးဝင်သူ၏မျက်နှာပေါ်တွင်အမာရွတ်၏ကုသမှုများအတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးမှို ladybird ချုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အဘယ်အရာကိုယောက်ျား Taurus နဲ့တူအမျိုးသမီးတွေ?
Anubias - ထိုငါးမွေးကန်များတွင်အကြောင်းအရာ
သားအိမ် cyst: ခွဲစိတ်ခြင်းမရှိဘဲကုသမှု - အဖြစ်မှန်သို့မဟုတ်ဒဏ္ဍာရီ?
ရွှေဖရုံသီး - အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများနှင့် contraindications
သဲကိတ်မုန့် - စာရွက်
Keith Urban, နီကိုးလ် Kidman $ 40 သန်းများအတွက်အိမ်ကြီးပေးအပ်
ဖက်ရှင် Dream: ဖိနပ်များ၏ 25 စျေးအကြီးဆုံးအားလုံး
စက်တင်ဘာလ 1, 1 လူတန်းစား
ရုပ်ရှင်ပွဲတော် MDF မျက်နှာစာ